Dagaalyahanada Al-shabaab ayaa maanta madaafiic ku weeraray garoonka dayuuradaha degmada Buulo Burde ee gobolka Hiiraan.
Garoonka Buulo Burde ay waxaa fariisimo ku leh ciidamada dowlada iyo kuwa AMISOM, waxaana uga soo dega dayuurado u sida saadka iyo qalabka ciidamada, maadaama degmadaas ay dhinaca dhulka ka go’doomiyeen xoogaga Al-Shabaab.
Ma cadda khasaaraha madaafiicdan ay geysteen hase ahaatee ciidamada AMISOM iyo kuwa dowlada ayaa ku jawaabay madaafiic kale oo ay ku rideen goobaha laga soo duqeeyey.
Gudomiyaha degmada Buulo Burde ayaa sheegay in duqeymahaas ka dib ay ciidamada AMISOM iyo kuwa dowlada ku baxeen meelaha laga soo riday madaafiicda, ayna kala ceyriyeen kooxo ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugnaa meelo ku dhow garoonka Buulo Burde.
Weerarkan ayaa ku soo aadaya xili habeen hore dagaalkii ugu xumaa uu Buulo Burde ku dhexmaray ciidamada huwanta iyo xoogaga Al-shabaab kaasoo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo kala gaaray labada dhinac.